यौ’न सम्पर्कपछि पुरुष किन निदाउँछन् ? एक पटक अबस्य पढ्नुहोस्... -
यौ’न सम्पर्कपछि पुरुष किन निदाउँछन् ? एक पटक अबस्य पढ्नुहोस्…
अधिकांश पुरुष यौ-न स’म्पर्कपछि निदाउने गर्छन् । यही कारण कति महिलाले आफ्नो पार्टनर वा पतिलाई शं’काको दृष्टिले हेर्ने समेत गर्छन् । आफूलाई यौ’न साधनमात्रै मानेको वा आफ्नो पार्टनर कम’-जोर भएको भन्ने भ्र’म उनीहरूमा पर्छ । तर मार्क लेनर र बिली गोल्डबर्गले आफ्नो किताव ‘यौन सम्प’र्कपछि पुरुष किन निदाउँछन्?’ मा यसको कारण उल्लेख गरेका छन् ।
सामान्यतया यौ-न स’म्पर्कपछि पुरुषलाई निन्द्रा लाग्छ तर महिला भने गफ गर्न मन पराउँछन् । यसका केही बायोलोजिकल वा जैविक कारण रहेको लेखकद्धयले बताएका छन् । पहिलो कारण भनेको प्रोलेक्टिन नामक पदार्थ हो ।
युवतीहरुमा देखिने एक प्रकारको ‘अनौठो’ रोग ! एक पटक अबस्य हेर्नुहोस्…
मोटाइएला कि भनी डराउने, डाइटिङ गर्ने र दुब्लाउने अनौठो रोग विशेष गरी युवतीहरुमा देखिने गर्छ। यो पत्याउनै नसकिने खालको रोग हो। खासगरी, १३ देखि २० वर्षका युवतीमा यो रोग बढी पाइन्छ। यस्ता युवती मोटाइएला भनेर डाइटिङ गर्छन्, मोटो बनिन्छ कि भन्ने ठूलो त्रास लिएर बस्छन्।
उनीहरुको विस्तारै विस्तारै तौल घट्दै जान्छ, शरीर दुब्लो पातलो देखिन थाल्छ। बिरामी दुब्लो हुन्छ, बारम्बार ऐना हेर्ने गर्छ र आफू दुब्लो पातलो भए पनि शरीर मोटो भएको अनुभव गर्छ। बिरामीले अझै खाना कम खाने, खाएको पनि बान्ता गरेर बाहिर निकाल्ने गर्छ। बिरामीमा कूपोषणका लक्षणहरु देखिन थाल्छन्।
पातलो शरीर, शरीरमा पानीको भाग कमी तथा अन्य भिटामिन, प्रोटिन लवण आदि तत्वको कमी हुन थाल्छ। बेलैमा होस नपुर्याउने हो भने बिरामीको मृ’त्यु पनि हुन सक्छ। यो रोगले म’हिनावारी गडवडी हुने समस्या पनि निम्त्याउँछ। तर, यो रोग लागेको हो भनेर पत्ता लगाउन भने गाह्रो छ। केही बिरामी खानेकुरा अनियन्त्रित तरिकाले खाने खालका पनि हुन्छन्।
धेरै खाने कुरा खाएँ अब बान्ता गर्नुपर्छ, बा पखाला लगाउने औषधि खानुपर्छ भन्ने सोचाइ यस्ता बिरामीको मनमा आउँछ। दिशा गराउने औषधि बढी सेवन गर्न थाल्छन्। खाने बानीमा हुने परिवर्तनले गर्दा बिरामीको शरीर कमजोर हुने, शरीरमा पौष्टिक तत्वको कमि हुने, कुपोषण हुने, दुब्लाउँदै जाने लक्षण देखिन्छ। यो रोग लागेका बिरामी डि’प्रेसनबाट पनि पीडित हुन्छन्।
चिन्ता लिइरहने, एक्लै बस्ने, नकारात्मक सोचाइ आइरहने हुन्छ। यस्ता धेरै बिरामीलाई रोग लागेको हो वा बानी नै यस्तै हो भन्ने थाहा हुँदैन। यो रोग पश्चिमा मुुलुकमा बढी पाइएको छ। लामो समय रहिरहने खालको यो रोगका बिरामीलाई औषधिको प्रयोग वा मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा उपचारबाट निको पार्न भने सकिन्छ। मनोविद गोपाल ढकाल ‘दैनिक हेडलाईन्स’ डटकम बाट ।
← यी ५ युवती मध्ये कुन युवती मनपर्यो ? एक रोज्नुस् अनि थाहा पाउनुस् आफ्नो व्यक्तित्व !
होशियार ! धेरै विर्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. →